सीप सिकेसगैँ मधेसी, मुस्लिम, दलित महिला उत्साहित |
सीप सिकेसगैँ मधेसी, मुस्लिम, दलित महिला उत्साहित
प्रकाशित मिति :2017-11-21 11:47:26
पर्सा । सधैँ चुल्हो चौकामा मात्रै व्यस्त रहने वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं २९ बसडिल्वाकी रिंकु ठाकुरको अहिले दैनिकी फेरिएको छ । ४५ दिनसम्म हाते कढाइको तालिम लिएपछि उनमा आत्म विश्वास बढेको छ ।
परिवारका सदस्य बाहेकका मानिसहरुसँग बोल्न लजाउने उनी अब सार्वजनिक स्थलमा हुने कार्यक्रमको उद्घोषण गर्न सक्ने भएकी छन् । ‘सधैँ चुलोचौको र घरायसी काममा व्यस्त रहने गरेको थिए । खाना पकाउने, परिवारका सदस्यलाई खुवाउने, भाँडा माझ्ने, लुगा धुने काममा सिमित थिए । पहिलो पटक हाते कढाइको तालिम लिएपछि आत्म विश्वास बढेको छ । केहि गर्न सक्छु भन्ने आँट आएको छ । उनले भनिन् ।
उनी मात्रै होईन हाते कढाइको सीप सिकेपछि आत्मनिर्भर हुनेमा ढुक्क भएका वीरगञ्ज महानगरपालिका र पर्सागढी नगरपालिकाका महिला अहिले निकै उत्साहित बनेका छन् । दुई नगरपालिकाको तीन वटा वडामा गठन भएका नागरिक सचेतना केन्द्रमा आवद्ध महिलाहरुले ४५ दिने हाते कढाइको तालिम पुरा गरिसकेका छन् । तालिम लिए लगत्तै कुनै महिला अरुलाई सिकाउने भईसकेका छन्, भने कतिपयले कामको अर्डर समेत लिन थालिसकेका छन् ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं २९ बसडिल्वामा सामुदायिक विकास कार्यक्रम मार्फत नेपाल महिला कल्याण समाजको सहजिकरणमा सञ्चालित ४५ दिने हाते कडाइको तालिममा उनीहरु सहभागी भएका थिए । तालिममा सहभागी २५ जना मधेसी, मुस्लिम महिला सिकेको सीपबाट आत्म निर्भर हुनेमा ढुक्क छन् ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका २९ बसडिल्वाकै रञ्जिता महतो सीप भएपछि दुईचार रुपैँयाका लागि श्रीमानको मुख ताक्न नपर्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन् –‘ हामीले सीप सिकेका छौँ, अब समूह बनाएर कामलाई निरन्तरता दिने सोच बनाएका छौँ ।’ महतोले भनिन्, –‘विश्वास गरेका छौँ, दुई चार पैसाका लागि श्रीमानको मुख ताक्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।’
तालिमकी प्रशिक्षक शान्ति झा ले सीपबाट आत्मनिर्भर हुन सक्ने उदाहरण आफैं भएको बताईन् । आफूले सयौं महिलालाई तालिम दिईसकेको बताउँदै उनले श्रीमानको एक पैसा पनि खर्च नगराई छोरा छोरीलाई उच्च शिक्षा दिएको बताईन् ।
‘सीपले मानिसलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउँछ भन्ने कुराको उदाहरण खोज्न अन्त जानै पर्दैन ।’
उनले भनिन् । ‘ मैले यही बुटिकको सीप सिकेर आफूलाई अगाडी बढाएको छु । कतिपय महिलाहरुलाई रोजगारी पनि दिलाएको छु ।’
नेपाल सरकार तथा बेलायत सरकारको सहयोगमा स्थानीय नागरिक सचेतना केन्द्रमा आवद्ध महिलाहरुको माग अनुसार नै जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन ‘हाते कढाइ’ को तालिम सञ्चालन गरिएको सिडिपीकी फिल्ड सुपरभाईजर लक्ष्मी खरेलले बताईन् ।
कहिल्यै कुनैपनि सीपमुलक तालिम नलिएका महिलाहरु उत्साहपूर्वक सहभागी भएको उनको भनाई छ । ‘महिला दिदी बहिनीहरुको उत्साह देखेर म त छक्कै परेको छु ।’ उनले भनिन् ‘ डेढ दुई घण्टा हिँडेर पनि एकदिन पनि नछुटाई तालिम लिएका छन् । उनीहरुको उत्साहलाई कायम राख्न सके आर्थिक आत्मनिर्भरता हुने निश्चित छ ।
हाते कढाइको तालिम पुरा गरेकी बबिता देविले वितेको छठमा सीप सिकेकै कारण धेरै रकम बचत भएको सुनाईन. । ‘ छठमा ५-६ हजारमा सारी किन्नुपर्ने बाध्यता थियो, यसपाली आफैंले साडीमा बुट्टा भर्ने काम गरे ।’
उनले भनिन् । ‘ ५-६ हजार खर्च हुने ठाउँमा कमैमा काम चलेको छ । त्यति मात्र होईन हामी नजिकै घर भएकाहरु मिलेर काम गर्न सहमत भईसकेका छौं । अर्डरहरु पनि आउन थालेको छ । ’
सिडिपीकी पर्सा कार्यक्रम संयोजक शोभा महतोले तालिममा सहभागी महिलाहरुलाई अलपत्र नछोडिने बताईन् । ‘उनीहरुले सीप सिकाएर हामी त्यसै छोड्दैनौं, बिउ पूँजी पनि दिन्छौ, हाते कढाईका समान पनि दिएका छौँ ।’ महतोले भनिन् ‘ अझ बजारीकरणका लागि पनि सहयोग गर्छौ ।’
वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्ति कार्कीले आएका चुनौतिहरुको सामना गर्दै अगाडी बढ्ने महिला सधैँ सफल भएको बताईन् । महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरणका लागि महानगरपालिकाले पनि काम गरिरहेको भन्दै महिलाहरुले उत्पादन गरेको सामाग्रीको बजारीकरणका लागि सकेको सहयोग गर्ने बताईन् । तालिममा बसडिल्वा, पचरुखी र लालपर्सा क्षेत्रमा गठन भएका नागरिक सचेतना केन्द्रमा आवद्ध दलित, मधेसी, मुस्लिम समुदायका २५ जना महिला सहभागी भएका थिए ।
काम गर्न थालेपछि श्रीमान बोल्न थाले
पर्सागढी नगरपालिका, पचरुखीकी मोविना खातुन बसडिल्वामा हाते कढाइको तालिम लिन जान शुरु गरिन् । उनको घरबाट बसडिल्वा आउन पैदल तीन घण्टा जति लाग्छ । लामो बाटो हिँडेर तालिममा सहभागी हुन थालेपछि परिवारमा त्यसैका कारण कलह उत्पन्न हुन थाल्यो ।
मोविना गहँभरी आँसु पार्दै ती दिन सम्झिन्छन् ‘ किन त्यती लामो बाटो हिँडेर जान्छ्यौं, त्यो सीप सिकेर के हुन्छ ? भन्दै श्रीमानले कराउनुभयो, बोलचालै बन्द भयो ।’
आफूले श्रीमानको कुरा अटेर गरेर सीप सिक्न निरन्तर आएको मोबिना बताउँछिन् । परिवारका अन्य सदस्य पनि रिसाउन थाले । तैपनि उनी निरन्तर तालिममा सहभागी भईनै रहिन् । जब उनले सीप सिकेर काम पनि गरेर देखाईन् । अहिले श्रीमान खुशी छन् । त्यति मात्रै होईन मोविनाले दुईजना शिष्य समेत बनाईसकेकी छन् । उनीहरु मोविनासँगै हाते कढाई सिकिरहेका छन् ।